SALAMO 69.1-13	F. 6, 7 | Fitandremana Ankadifotsy
SALAMO 69.1-13	F. 6, 7
FANKAHALANA NOHO NY AMIN’I JEHOVAH
Noho ny Aminao (7). Vahoaka nofidin’Andriamanitra ireo Zanak’israely (Eksodosy 6.7a). Naniry ny handehanan’izy ireo amin’ny fahatahorana sy fankatoavana Azy i Davida. Raha ny aminy manokana dia nanao izay mahitsy eo imason’i Jehovah izy ary saro-piaro ny amin’ny fahamasinany (9; 1Mpanjaka 15.5). Izany indrindra no hankahalana azy (7). Tsy ny vahoaka ihany fa ny zanany, ireo sakaizany dia samy nifofo na ny ainy na ny fanjakany (2Samoela 15.12-14). Mafy loatra ny fankahalana ka tsaroany toa hanafotra azy (1-4). Teo ireo nihomehy sy nanadroadro azy raha nahita ny alahelony sy ny fanehoany izany (10-12).
Tsy nihevitra ny tenany ihany (5-6). Na dia mafy aza ny alahelony, mbola nisaina ny hafa ihany i Davida. Nanahy izy ndrao nisy akony tamin’ireo izay nitady marina ny Tompo ny fahalemeny ka hampihemotra na haketraka azy ireo.
Tsy misosa ho azy. Tsy mijanona eo amin’ny fanekena an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainan’ny kristiana. Eo no tena manomboka ny atao hoe adim-panahy. Efa nampiomana antsika Jesoa ary nampahery antsika ho vonona hizaka fahoriana noho ny Aminy: « Raha halan’izao tontolo izao ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa Izaho efa halany talohanareo. » (Jaona 15.18).
Fampieritreretana : « Eny, izay rehetra te-ho velona amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, izay ao amin’i Kristy Jesoa, dia henjehina » (2Timoty 3.12).
Safidy misy fiantraikany ny fanarahana ny Tompo sy ny sitrapony. Tsy izay hitan’ny maso sy renesin’ny sofina no hampihemotra. Toa an’i Davida, dia aoka isika tsy ho menatra ny hiantoraka amin’Ilay iorenan’ny finoantsika. Izy irery no Mpamonjy ary manome ny fandresena (13).